जुन Thunar कहिल्यै थियो लिनक्सबाट
के Thunar कहिल्यै थियो
थुनार एक धेरै सरल र हल्का फाईल ब्राउजर हो (र उही समयमा डेस्कटप प्रबन्धक), जुन पूर्वनिर्धारित रूपमा भित्र आउँछ Xfce। तर सरल हुनको लागि, यसले केहि चीजहरू त्याग गर्दछ जुन हामी अन्य फाईल ब्राउजरहरूमा प्राप्त गर्न सक्दछौं डल्फिन o नटिलिलस.
मेरो पुरानो ब्लगमा समर्पित Xfce मैले केहि चीजहरू गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूबाट केही प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु थुनार, जुन यो पूर्वनिर्धारित द्वारा ल्याउँदैन वा केवल गर्न सक्दैन। के प्रयोगकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी माग गर्ने दुई मुख्य विशेषताहरू हुन्:
ब्राउजरलाई २ प्यानलमा विभाजन गर्नुहोस्।
ट्याबहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यस को बारे मा अविश्वसनीय कुरा हो PCManFM यो धेरै हल्का छ र यदि यसले ट्याबहरू समर्थन गर्दछ। वास्तबमा, थुनार हालको संस्करणमा, यो यो हो कि यसले टाढाको पहुँचको लागि समर्थन थपेको थियो SFTP, किनकि पहिले हामीले यो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्‍यो गिगोलो म भित्र देखाउँछु यो ट्यूटोरियल.
कुनै श doubt्का बिना, यी विकल्पहरूको अभाव विरोधाभासपूर्ण छ। थुनार मा मात्र फाइल प्रबन्धक छ जीएनयू / लिनक्स तपाईसँग विकल्प छ हटाउन योग्य उपकरणहरूमा पठाउनुहोस् कन्टेक्स्ट मेनूमा जब हामी सही क्लिक प्रयोग गर्छौं, Windows, र यद्यपि डल्फिन केहि समान छ, यो भित्र जत्तिकै सरल छैन थुनार। तिम्रो के बिचार छ?
मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, Xfce द्वारा व्यवस्थापन गरिएको छ थुनार जस्तै नटिलिलस en जिनोम। यसैले मलाई आशा छ कि विकासको साथ Xfce, किनकि यस उत्कृष्टमा सुधारहरू थपिएका छन् डेस्कटप वातावरण, थुनार विकास र सुधार्न पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » स्वरूप / निजीकरण » के Thunar कहिल्यै थियो
सत्य यो हो कि यदि तपाईंले ती दुई विकल्पहरू हराउनुभयो भने ... वास्तवमा म ट्यागको व्यवस्थापन प्राप्त गर्न त्यहाँ कुनै प्लग-इन वा समान छ कि भनेर हेर्न "googling" थियो। तर म मेरो xfce मा प्रबन्धक र ब्राउजरको रूपमा नटिलस राख्ने प्रयास गर्दछु, वा यसलाई पूर्वनिर्धारित फाइल ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गर्दछु। सादर।
ड्र्नोचोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई साँच्चिकै thunar मनपर्दछ, र म यसलाई हाल प्रयोग गर्छु, तर यसले आईकनहरू [प्रतीकहरू भन्दा फरक] फोल्डरहरू "अनुकूलित" गर्न विकल्पको पनि अभाव छ।
नमस्कार! के कसैले मलाई निम्नका साथ सहयोग गर्न सक्छ?:
आज मैले गल्तिले thunar विन्डोमा स्थितिपट्टी हटायो र म अब शीर्षमा रहेको मेनू देख्न सक्दिन (फाईल - दृश्य - उपकरणहरू - मद्दत, आदि)।
म "स्थिति पट्टि" फिर्ता प्राप्त गर्न कुनै उपाय फेला पार्न सक्दिन। म लिनक्स टकसाल १ x xfce प्रयोग गर्दैछु।
मलाई आशा छ कसैले यसको समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ
पल! मलाई उत्तर दिनु भएकोमा धन्यवाद !! मँ भन्छु कि म समस्या समाधान गर्न सक्छु! जे भए पनि जवाफको लागि धन्यवाद! मँ तपाईको ब्लग र सोध्नुहोस् डे लिनक्स लाई ध्यानमा राख्छु!
मौरिसियो, तपाईंले यसलाई कसरी समाधान गर्नुभयो? म २ महिना भन्दा बढि जस्तो गरी छु त्यसैले मैले यसलाई हटाएँ र pcmanfm प्रयोग गर्दैछु। तर म thunar मात्र प्रयोग गर्न चाहान्छु किनकि यस बारमा मसँग ट्याबहरू थोरर्नको लागि पनि छैन र म यसलाई प्रयोग गर्न मन पराउँदिन ...
तपाईंले थिच्नु पर्छ:
म किन एकता प्रयोग गर्न चाहन्न?
LMDE २०१०१० RC को समीक्षा र स्थापना